3 Talaabo oo Bloggaaga looga ilaalinayo Dacwad Weyn oo Dufan | Martech Zone
3 Talaabo oo Bloggaaga looga ilaalinayo Dacwad Weyn oo Dufan
Sabti, Agoosto 16, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maanta waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee BlogINDIANA waxayna ahayd mid fantastik ah. Wax badan ayaan qabtay murgacasho laga bilaabo dhacdada, oo xitaa socodsiisay quudin toos ah in yar.
Kalfadhigii ugu horreeyay ee aan kaqaybgalay runtii way i qarxiyeen, waxay ku saabsanayd dhinacyada sharciga ah ee baloogga. Kalfadhiga ma uusan qaban qareen laakiin waxaa qora blogger, Andrew Paradies, oo runtii tixgeliyay dhammaan khiyaanooyinka sharciyadeed ee la xiriira qorista. Mawduucu wuxuu ahaa mid igu kalifay inaan isla markiiba tafatirto cagtayda oo aan ku daro Dacwayn Boggayga Shuruudaha Adeegga ah.
1. Ku Darso Diidmada Blog-kaaga adoo ku xiraya bogga hoose
Dhammaan xogta iyo macluumaadka lagu bixiyay boggan waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya. Martech Zone wax matalaad ah kama sameynin sax ahaanta, dhammaystirka, hadda, ku habboonaanta, ama ansaxnimada wixii macluumaad ah ee ku yaal boggan & mas'uul kama noqon doono wixii khaladaad ah, ka-dhaafitaanno ah, ama daahitaanno ah macluumaadkan ama wax khasaare ah, dhaawacyo ah, ama waxyeelo ah oo ka dhasha bandhiggeeda ama isticmaal. Dhammaan macluumaadka waxaa lagu bixiyaa aasaaska.
Diidmada ayaa dadka u oggolaaneysa inay ogaadaan in macluumaadka ay ka helayaan balooggan loola jeedo in loo qaato fikrad ahaan oo aan loo qaadan xaqiiqda. In kasta oo ay si fiican u muuqdaan, sharci ahaan maahan inaad sheegto mooyee! Ku dheji diidmada bartaada maanta. Hada samee! Ha sugin.
Way ka fiican tahay inaad haysato a Afeef ka badan khatarta a $ 20 million dacwad.
2. Ku bilow Shirkad Mas'uuliyad Xaddidan u leh Blog-kaaga
Intaa waxaa sii dheer, sidoo kale waxaan dhigay bloggeyga under shirkaddayda mas'uuliyadda xaddidan (Llc) U dhigista Blog hoosta Llc-ga, DK New Media wuxuu dhigayaa balooggeyga dalladda shirkadayda (taas oo ahayd tan iyo markii aan bilaabay Llc - laakiin waan iska indhatiray in aan ku qoro qoraalkeyga balooggeyga).
Uma baahnid inaad ka walwasho waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha sida faallooyinka - taasi waa lagu ilaaliyo qodobka 230 ee wax ka beddelka koowaad.
3. Taageerida Aasaaska Xadka Elektarooniga ah
Waxaan ku dari lahaa waxa seddexaad ee aad si dadban naftaada u difaaci karto waa inaad is-qorto ama ugu deeqdo Aasaaska Aasaasiga ah ee Elektronik.
Tani waa hay'adda kaliya ee fiirineysa una dagaallameysa xuquuqda iyo xorriyaadka dadka wax qora ee wax qora.
Aamus oo dhadhamso farriimaha waaweyn ?!
Goorma ayey tahay inay shirkaddu ku dhex daadato Baraha Bulshada?
Aug 17, 2008 at 9: 09 AM
Tani waxay ugu dambeyntii igu qancisay inaan sameeyo ugu yaraan tallaabada ugu horreysa.
Shuruudahaaga Adeeg waxaa ku jira laba qalad oo higgaado oo yar yar. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto laba waxyaalood oo dheeraad ah:
1.) Calaamadaha ganacsiga waxaa iska leh milkiilayaashooda
2.) Adigu masuul kama tihid waxyaabaha aad ku xirxirto.
jay warbaahinta bulshada
Jun 23, 2009 saacadu markay ahayd 2:33 AM
Tani runti waxtar ayey leedahay. Waxaan hayaa baloogyo jira 3 sano weligeyna ma aan dhigin afeef ama wax.
Jul 24, 2011 markay ahayd 12:47 AM
Waad ku mahadsan tahay Douglas, tan ayaan sameeyaa isla markiiba, sidoo kale waad ku mahadsan tahay Martin, si aad u soo saarto arinta calaamadaha ganacsiga.